» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २६
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २६
३ श्रावण २०७७, शनिबार १९:४६
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ३ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । उनीहरुमध्ये १५ जनाका बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा चर्चा गरिसकेका छौँ । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिन तयार पारिएको भिडियो सिरिजको यो २६ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका थप ७ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा नरेन्द्र विश्वकर्मा, शिवम भण्डारी, सुदृष्टि राई, आयुश राई, प्रजित लामा, राजिव परियार र सोनु लामाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
१६) नरेन्द्र विश्वकर्मा –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका सोह्रौँ प्रतियोगी हुन् नरेन्द्र विश्वकर्मा । काठमाडौँ निवासी नरेन्द्रले अडिसनमा ‘रुप यौवन तिम्रो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले दोस्रो पटक ‘पल पल तिम्रो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१७) शिवम भण्डारी–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका सत्रौँ प्रतियोगी हुन् शिवम भण्डारी । डडेल्धुराका शिवम सानैदेखि बुवा र दिदीको संरक्षणमा हुर्किएका हुन् । सानैमा आमा गुमाएका शिवमलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न उनका दिदी र भिनाजुले निकै सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । उनले अडिसनमा ‘माछी काँडैले’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकको मन जितेका शिवमले दोस्रो पटक ‘बनै खायो डढेलोले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१८) सुदृष्टि राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका अठारौँ प्रतियोगी हुन् सुदृष्टि राई । सुरसाला आईडल जुनियरमा सहभागी भएर चर्चा कमाएकी सुदृष्टिका केही गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । उनी सानैदेखि गायन क्षेत्रमा लागेकी हुन् । उनले गायन क्षेत्रमा सानै उमेरमा विभिन्न पुरस्कारहरु पनि जितेकी छिन् । उनले अडिसनमा ‘फुलको थुंगा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले दोस्रो पटक ‘लहरे बर’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । तेस्रो पटक ‘एउटी परदेशी’ गीत गाएकी सुदृष्टि तिनै गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् ।
१९) आयुश राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका उन्नासौँ प्रतियोगी हुन् आयुश राई । उनले अडिसनमा ‘गोरेटो अनि’ बोलको गीत गाएका थिए । भोजपुर निवासी आयुश सेक्युरिटीको काम पनि गर्छन् । पहिलो गीतमा निर्णायकको मन जित्न नसकेता पनि उनले दोस्रो गीत ‘तिमीले साथ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२०) प्रजीत लामा–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका बिसौँ प्रतियोगी हुन् प्रजीत लामा । ललितकला क्याम्पसमा सितारवादकका रुपमा ब्याचलर गरेका उनी संगीत पनि सिकाईरहेका छन् । थानकोट निवासी प्रजीतले अडिसनमा ‘नचाहेको होईन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले सोही गीतबाट तिनै जना निर्णायकको मन जितेका हुन् । उनी दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् ।
२१) राजीव परियार–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका एक्काईसौँ प्रतियोगी हुन् राजीव परियार । राजीव नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । तनहुँ निवासी राजिवले अडिसनमा ‘देशले रगत मागे’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘सल्लाझैँ आमा’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनलाई निर्णायकहरुले केही फरक जेनरका गीतहरु गाउन लगाएका थिए । उनले ‘जाँदैछु पल्टनमा’ बोलको गीत गाएपछि निर्णायकहरुले दोस्रो राउण्डका लागि छनौट गरेका हुन् ।
२२) सोनु लामा–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका बाईसौँ प्रतियोगी हुन् सोनु लामा । शोलुखुम्बु निवासी सोनुका केही गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । उनले अडिसनमा ‘पर लैजाउ फुलहरु’ बोलको गीत गाएका थिए । दोस्रो पटक ‘मुटुको माझमा’ बोलको गीत गाएका थिए । निकै नै सुमधुर गीत गाएका उनलाई निर्णायकहरुले झुक्याएका थिए । छनौट नगरेको जस्तो गरेर उनलाई निणार्यकहरुले दोस्रो राउण्डका लागि छानेका थिए । शोलुखुम्बुबाट एकमात्र प्रतिनिधिका रुपमा रहेका सोनु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।